1 Jaona 3:1-2 "Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon’ [Gr. nomen’] ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’ Andriamanitra, sady izany tokoa isika! Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala Azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak’ Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa."
Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo mbola hampitomboina amintsika mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamantira Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izany indray no tenin'Andriamanitra tonga amintsika ankehitriny. Manambara any fahatsaran'Andriamanitra, ny fitiavany antsika Olombelona. Nataony mitovy amin'ny zanany isika, araka ny teniny ao amin'ny Genesisy dia mitovy endrika amin'Andriamanitra isika tsirairay avy izao. ary ny Fanahiny no ampitoerina ato anatintsika, dia ilay fofon'aina izay mamelona antsika. Fa rehefa tonga nanota indray Adama sy Eva dia lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo noho ny fihinana ny voankazo voarara tao afovoan'ny sahan'i Edena. Nanomboka teo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, ka raha tsy manao sorona alatsa-drà dia tsy hionona ny fahatezeran'Andriamanitra. Io no marika ny fibebahana teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona voalohany indrindra.
Koa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra lahy tokana tonga olombelona, dia izay mandray Azy sy mino Azy izay no tonga zanak'Andrimanitra araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:12-13 , Koa izay mandray an'i Jesosy irery ihany no afaka mandova ary mandray izany eo amin'Andriamanitra, hitantsika mantsy raha ny amin'ny maha olombelona fotsiny aza; raha misy ankohonana na fianakaviana iray. Ka ohatra hoe maty ny raim-pianakaviana ao anatin'io ankohona io, izay rehetra tsy ao anatin'izany na ireo izay tsy misoratra amin'io raim-pianakaviana io dia tsy ho afaka mandova azy. Fa ireo izay misoratra raha ny eo amin'ny fanjakana sy ny làlana dia afaka mandova azy izany. Dia toa izany koa isika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka ny ho mpiray lova amin'i Jesosy aloha isika raha tsy efa mino sy nandray an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra izay nirahiny tety ambonin'ny tany mba hamonjy antsika. Ka izay mandray Azy dia voasoratra hoe zanak'Andriamanitra. Izy no làlana ahafantsika misoratra anarana ho tonga zanak'Andriamanitra. Satria isika tany aloha raha mbola tsy nahafantatra na nandray an'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fianantsika; dia mbola toa anatin'ny haizina, fa rehefa tonga ao anatintsika kosa Izy dia tonga zanaky ny fahazavana, io ilay fanilo mitondra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
Toy ny Ampoule na "takamo" iray isika eo raha atao ny fampitahana amin'izao fiainantsika izao, raha mirehitra na tsy mirehitra io "takamo" na ny "ampoule" io dia dia tsy miova ny anarany fa tia izay foana, io anefa dia tsy hirehitra mihitsy raha tsy mifandray amin'ny reninjiro na ny vaton'aratra izany, izay vao afaka ny hirehitra io "ampoule" io. Na dia efa mipetaka avokoa aza ireo mampitohy azy ao amin'ny toerana izay misy azy ka tsy mifandray amin'ny foiben'ny herinaratra, dia tsy hirehitra mihitsy izy. Dia toa izany koa isika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa tsy mandray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpanapaka ny fiainantsika ihany koa isika dia tsy ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka ho tonga dahazavana tahaka an'i Kristy, araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana 5:8. Izay manambara fa tonga zanak'i ny mazava isika. Koa tokony handeha mandrakariva, amin'izany fahazavana izany, aoka tsy ho tapaky ny "interrupteur" na ny fanapahan'aratra isika, fa io dia ilay fahotana izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka noho izany dia mila mifandray sy mifanakaiky mandrakariva amin'ilay loharanom-pahazavana isika izay ahafantsika minfadray sy mifampitohy amin'Andriamanitra Ray. Ka ho mendrika ny ho atao hoe Zanany isika. Ary mpiray lova amin'i Kristy araka ny volaza ao amin'ny 1 Petera 1:4, ilay lova tsy mety simba sy tsy mety lo. Koa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ary ho mpanapaka ny fiainantsika isika dia hoy ny tenin'Andriamanitra amiko sy aminao hoe: "fa ny Ray dia tia anareo satria hianareo efa tia Ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin’ ny Ray Aho." izay hita ao amin'ny Jaona 16:27.
Koa izany àry ny fitiavan'Andriamanitra antsika ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy Tompo, koa efa nandray Azy isika, koa meteza àry, hifandray tsy ankiato amin'ny fiainantsika manotolo, aoka tsy ho tapaka izany fifandraisana izany mba ahalalantsika mandrakariva; izay tena sitrapon'Andriamanitra amintsika. Koa raha mahatsapa ianao fa tafasaraka amin'Andriamanitra ankehitriny, mbola vonona handray anao ny Tompo. Tsy handà anao Izy, miverena aminy na inona na inona fahotana vitanao, ary te ho tonga zanak'Andriamanitra marina ianao, dia raiso Jesosy Kristy; ekeo Izy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mifikira aminy, aza mety rebireben'izao tontolo izao satria izao tontolo zao hoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahalala Azy. Koa raha mandeha amin'ny haizina isika, manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, manao ny fanaon'izao tontolo izao dia tsy handova ny fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Nefa Andriamanitra dia tiantsika mandrakariva koa miverena amin'ny fitiavana voalohany, dia taminao nadray an'i jeosy Kristy ho mpanapaka ny fiainanao. Ankehitriny mantsy ny devoly dia mandeha sy mitady izay harapany tahaka ny liona tanora, koa mila mitandrina mandrakariva isika ny amin'izany, fa Ilay Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo dia tsy mamela antsika ho irery. Araka ny tenin'i Jesosy hoe "Izaho no mpiandry ondry tsara, fantatro ny ondriko ary fantatry ny ondriko Aho."
Koa ho tanteraka amintsika anie ny tsodanon'Andrimanitra manao hoe:"Ary Andriamanitry ny fiadanana, Izay nitondra an'i Jeososy Tompontsika, Mpiandry ondry lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny ran'ny fanekena mandrakizay. Izy anie hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay." Amen.
Date de dernière mise à jour : 15/09/2014